မက်ဆီ ဘာကြောင့် ဘူဖွန်နဲ့ အင်္ကျီ ခြင်းလဲခဲ့တာလဲ…?၊ အသက် ၄၃ နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ကစားသမားကြီးကို ဂုဏ်ပြုခြင်လို့လား၊ သူ့ရဲ့ အရှုံးကိုမှတ်မိနေစေဖို့လား…? – Premier League Special
မက်ဆီ ဘာကြောင့် ဘူဖွန်နဲ့ အင်္ကျီ ခြင်းလဲခဲ့တာလဲ…?၊ အသက် ၄၃ နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ကစားသမားကြီးကို ဂုဏ်ပြုခြင်လို့လား၊ သူ့ရဲ့ အရှုံးကိုမှတ်မိနေစေဖို့လား…?
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က အိမ်ကွင်းမှာ ဂျူဗင်တပ်ကို ၃-၀ နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်ဒို ဆိုတဲ့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားနှစ်ဦး ဆုံတွေ့တာကို ပရိသတ်တွေရော မီဒီယာတွေကပါ အာရုံစိုက်ပုံဖော်ခဲ့ကြတာပါ။
စီရော်နယ်ဒိုဟာ ၂၀၁၈ ကရီးရဲလ်ကနေ ဂျူဗင်တပ်ကိုပြောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်း မက်ဆီနဲ့ ပထမဆုံးပြန်လည်ဆုံတွေ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ၂ ဂိုးသွင်းပြီး မက်ဆီကို ခါးသီးတဲ့ည တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်းကျတော့ မက်ဆီကို ခါးသီးတဲ့ညဖြစ်စေခဲ့သူက ဂျူဗင်တပ်ရဲ့ ဝါရင့်ဂိုးသမားကြီး ဘူဖွန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၄၃ နှစ်ပြည့်ဖို့ တစ်လလောက်တောင်မလိုတော့တဲ့ ဘူဖွန်ဟာ အဲဒီပွဲမှာ မက်ဆီရဲ့ အားထုတ်မှု ၇ ကြိမ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ မက်ဆီဟာ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလ နောက်ပိုင်း ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာ ဂိုးပေါက်တည့်အောင်ကန်ချက် ၇ ကြိမ်မရှိခဲ့ဘဲ ဒီပွဲရောက်မှ ပြန်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဝါရင့်ဂိုးသမားကြီးရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုတော့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ ခြင်းမရှိပါဘူး။
ဘူဖွန်ဟာ လက်ရှိဂျူဗင်တပ်နည်းပြ ပီယာလိုထက်အသက် ၁၈ လပိုကြီးသူဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်မှာ သူ့အသင်းဟောင်း ပါးမားနဲ့စတင်ပွဲထွက်ခဲ့တော့ လက်ရှိဘာစီလိုနာပွဲထွက်လူစာရင်းက ကစားသမား ၄ ဦးဆိုရင် လူ့လောကထဲကိုတောင် ရောက်လာသေးတာမဟုတ်ပါဘူး။
ပွဲအပြီးမှာ မက်ဆီဟာဘူဖွန်နဲ့ အင်္ကျီခြင်းလဲခဲ့တာဟာ သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာ အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခြားတွေးစရာတွေကလည်းအများကြီးရှိနေပြီး ဘောလုံးကွင်းတွေထဲမှာ ကစားသမားဘဝနဲ့ သူတို့ထပ်မတွေ့ရတော့တဲ့ သဘောလား၊ သူ့ကန်ချက်တွေကို လက်စွမ်းပြကာကွယ်ခဲ့လို့ အင်္ကျီခြင်းလဲဖို့ မက်ဆီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလား၊ အသက် ၄၃ နှစ်ပြည့်ကာနီး အထိဆက်ကစားနိုင်လို့ ဂုဏ်ပြုတာလားဆိုတာ ဝေခွဲမရပါဘူး။
သေချာတာကတော့ ဘူဖွန်စောင့်တဲ့ဂိုးပေါက်ဟာ အဲ့သည့်ညက မက်ဆီ ဖြတ်မကျော်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။
မက်ဆီ အတွက်တော့ ကိုယ်အိမ်ကွင်းမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော် ယှဉ်ပြိုင်ဘက်နဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာ သိက္ခာဆယ်ဂိုးလေးတစ်ဂိုးတောင်မသွင်းနိုင်ခဲ့တာက ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာရှုံးခဲ့တဲ့ (၃)မှတ်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ဘူဖွန်ကလည်း မက်ဆီအတွက် အဲ့သည့်ညက အိပ်မက်ဆိုးတွေပေးသွားခဲ့တဲ့ အဓိကကျတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မက္ဆီ ဘာေၾကာင့္ ဘူဖြန္နဲ႕ အက်ၤီ ျခင္းလဲခဲ့တာလဲ…?၊
အသက္ ၄၃ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ့္ ကစားသမားၾကီးကို ဂုဏ္ျပဳျခင္လို႕လား၊ သူ႕ရဲ႕ အရႈံးကိုမွတ္မိေနေစဖို႕လား…?
ဘာစီလိုနာအသင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔က အိမ္ကြင္းမွာ ဂ်ဴဗင္တပ္ကို ၃-၀ နဲ႔ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ မက္ဆီနဲ႔ စီေရာ္နယ္ဒို ဆိုတဲ့ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးကစားသမားႏွစ္ဦး ဆုံေတြ႕တာကို ပရိသတ္ေတြေရာ မီဒီယာေတြကပါ အာ႐ုံစိုက္ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကတာပါ။
စီေရာ္နယ္ဒိုဟာ ၂၀၁၈ ကရီးရဲလ္ကေန ဂ်ဴဗင္တပ္ကိုေျပာင္းသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း မက္ဆီနဲ႔ ပထမဆုံးျပန္လည္ဆုံေတြ႕တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ စီေရာ္နယ္ဒိုဟာ ၂ ဂိုးသြင္းၿပီး မက္ဆီကို ခါးသီးတဲ့ည တစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မက္ဆီကို ခါးသီးတဲ့ညျဖစ္ေစခဲ့သူက ဂ်ဴဗင္တပ္ရဲ႕ ဝါရင့္ဂိုးသမားႀကီး ဘူဖြန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ ၄၃ ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ တစ္လေလာက္ေတာင္မလိုေတာ့တဲ့ ဘူဖြန္ဟာ အဲဒီပြဲမွာ မက္ဆီရဲ႕ အားထုတ္မႈ ၇ ႀကိမ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ မက္ဆီဟာ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ပိုင္း ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္တစ္ခုမွာ ဂိုးေပါက္တည့္ေအာင္ကန္ခ်က္ ၇ ႀကိမ္မရွိခဲ့ဘဲ ဒီပြဲေရာက္မွ ျပန္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဝါရင့္ဂိုးသမားႀကီးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကိုေတာ့ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဘူဖြန္ဟာ လက္ရွိဂ်ဴဗင္တပ္နည္းျပ ပီယာလိုထက္အသက္ ၁၈ လပိုႀကီးသူျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ သူ႔အသင္းေဟာင္း ပါးမားနဲ႔စတင္ပြဲထြက္ခဲ့ေတာ့ လက္ရွိဘာစီလိုနာပြဲထြက္လူစာရင္းက ကစားသမား ၄ ဦးဆိုရင္ လူ႔ေလာကထဲကိုေတာင္ ေရာက္လာေသးတာမဟုတ္ပါဘူး။
ပြဲအၿပီးမွာ မက္ဆီဟာဘူဖြန္နဲ႔ အက်ႌျခင္းလဲခဲ့တာဟာ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ ျပယုဂ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တစ္ျခားေတြးစရာေတြကလည္းအမ်ားႀကီးရွိေနၿပီး ေဘာလုံးကြင္းေတြထဲမွာ ကစားသမားဘဝနဲ႔ သူတို႔ထပ္မေတြ႕ရေတာ့တဲ့ သေဘာလား၊ သူ႔ကန္ခ်က္ေတြကို လက္စြမ္းျပကာကြယ္ခဲ့လို႔ အက်ႌျခင္းလဲဖို႔ မက္ဆီက ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာလား၊ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ျပည့္ကာနီး အထိဆက္ကစားႏိုင္လို႔ ဂုဏ္ျပဳတာလားဆိုတာ ေဝခြဲမရပါဘူး။
ေသခ်ာတာကေတာ့ ဘူဖြန္ေစာင့္တဲ့ဂိုးေပါက္ဟာ အဲ့သည့္ညက မက္ဆီ ျဖတ္မေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တာပါပဲ။ မက္ဆီ အတြက္ေတာ့ ကိုယ္အိမ္ကြင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္နဲ႕ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုတဲ့ပြဲမွာ သိကၡာဆယ္ဂိုးေလးတစ္ဂိုးေတာင္မသြင္းႏိုင္ခဲ့တာက ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာရႈံးခဲ့တဲ့ (၃)မွတ္ထက္အမ်ားၾကီးပိုပါတယ္။ ဘူဖြန္ကလည္း မက္ဆီအတြက္ အဲ့သည့္ညက အိပ္မက္ဆိုးေတြေပးသြားခဲ့တဲ့ အဓိကက်တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ယူနိုက်တက်အသင်းကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာကို အသင်းဘုတ်အဖွဲ့က သီခံနိုင်စွမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီး တစ်လအတွင်း လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းထုတ်တော့မယ်ဟုဆို
ယူနိုက်တက်အသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရင်း ရှာမတွေ့ဖြစ်နေတယ်လို့ ဘရောင်းဖွင့်ဟ